PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2019-01-10 - Masihleke
Isolezwe lesiXhosa - 2019-01-10 - IINDABA - MANONO MDLAZI
MOLWENI bantase, ndiyanazi ke nina ningangavumi kulant’ba inguJanyuwari engathi uJanyuwari wazalwa ndim.
Ngenivuma qha nina kuba ndiza necebo elihle gqithi eliza kususa ikati eziko apha kule nyanga eneeveki ezintandathu.
Naku ukwenzeka, bantase kuza kufuneka sibeni zitshomi sonke ukuze sizokulwa le nyanga yendlala.
Xa siseteksini eya emsebenzini abafake imisesane yemitshato mabayikhuphe bonke, siyithengiseni sakugqiba sabelaneni ngemali aph’ eteksini.
Ungabinaxhala sisi womsesane, wena nje usinika inombolo yomnxeba sitsalela abantu abadala emva ekhaya ezilalini sizenza abakhathazekileyo, sibaxelela ukuba sidibene nawe ulele phantsi endleleni eya emsebenzini, ubethwe wamaka zezi ntwana zakuthathela yonke into zathatha nalo msesane nakakade.
Ubhuti-myeni wakho ke yena simxelela nesibhedlele esikubalekisele kuso, kodwa ke ibingumothuko njee ufumene isitofu wakhululwa sikusa emsebenzini njengangoku angabinaxhala. Hayi bantase sizama ukulwa le ndlala kaJanyuwari nathi akho nto esingayenza sakuncedwa yile misesane yenu beniyifakwa ngoDisemba, futhi nje xa siyibeke olu hlobo ubhut’ kaThembisa uza kuthengela omnye xa imali sele idibene ngoMatshi.
Koobhuti: Nina ke siza kunicela ninikele ngemisesane nangeewotshi, kaloku nini intloko zamakhaya aseMzantsi, noMongameli yindoda, nina ke nakunikela kakhulu futhi ayigolozisi tu okanye sakubiza amapolisa.
Make sibaliseni ngeholide ke ngoku bantase ke siyekeni ukuthetha ngendlala siza kuba neentloko ezinkulu nezisu ezikhulu. Hayi kodwa bekumnandi shem ngoDisemba yhu!
Sihamba imigidi, imitshato nemicimbi katsiki, inyama neziselo zamahala bezilahlile tsi! Zekubekho naba abafana nathi oomama bendawo ebebevele bavuke ngenja ixukuxa bayokubuya ngezibane, iveki iqale de iyokuphela, uyayiva ke ngoku?
Ayisithi sonke abangenamali kuJanyuwari, singabanye sincedwe ngamatheko, imigidi nemicimbi kaDisemba. Kangangokuba ndizokuvula ishishini lokuzilolonga, heyi! abantu bagalele maan!
KooMaGumede kuza kufuneka nikhuphe amafutha ke ngoku, nakundibamba kuMXit xa ufuna iinkcukacha zaseNohombile Gym Yard.
Yhoo umzimba uyala kodwa ngoku, ingathi kuza kufuneka ndiyokubhalisa eAndizi Production ndizokufumana iphepha elindigunyazisa ukuba ndingawubeki umcondo wam iveki yonke emsebenzini, ndakubonwa nje emasangweni ala nkampani ndibizelwa amapolisa.